WAR DEG-DEGA Siyaasiga Jawar Mohamed ayaa laga siidaayay Xabsiga Kaasoo muddo laba sano ku xidhnaa Addis Ababa. |
WAR DEG-DEGA Siyaasiga Jawar Mohamed ayaa laga siidaayay Xabsiga Kaasoo muddo laba sano ku xidhnaa Addis Ababa.
Jigjiga(GNN):-Jawar Mohamed iyo Baqale Gabra oo gudoomiye iyo ku xigeen u kalla ahaa xisbiga OFC ee oromada ayaa la xiray dabayaaqadii junne 2020 kadib dilkii Fanan Haachalu Hundeesaa.
Jawar mohamed ayaa xiligaas lagu eedeeyay inuu waday kicin bulsho iyo inay xoog kula soo wareegayeen Meedka Fanaanka oo lagu aasi rabay gobolkiisa.
Dhawr jeer ayaa maxkamad la soo taagay waloow aysan jirin wax dambi lagu soo oogay iyo cadeeymo waxaana tiraba dhawr jeer garsoorku dalbadeen in la keeno cadaymo lagu qanci karo oo ku aadan eedaymihiisa.
Xoggaha hoose ayaa tibaaxaya in Abiye Axmed iyo siyaasiyiinta Oromaddu Geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen sidii loo xalin lahaa tabashooyinka Oromadda dhexdeeda Xabsigana looga siidayn lahaa Ragga wax galka u ah Oromadda.
Abiye Maanta waxaa uu sheegay in loo baahanyahay dib u heshiisiin iyo iscafis Guud taasoo gogol xaadh u sii ahayd sii daynta siyaasiyiinta Oromadda.
Abiye Axmed ayaa doorkaan Ciyaarayo siyaasad ka duwan tiisii hore waxaana uu mar kalle rabaa inuu dib u kasbado kalsoonidii Reer Tolkiis(Oromo) Kuwaasoo bilaabay inay la coloobaan markii uu ugaariga ku bilaabay Haldooradooda.